Rotary Machines mpanamboatra, mpamatsy - China Rotary Machines Factory
Masinina K2 Revolution Tattoo Cartridge
Môtô tsy manan-kery alemanina 25x22mm Hafainganana mihodina: 12V 11000rpm Torque: 420g Tsipiriany haingana: karazana maharitra: karazana basy vita amin'ny tatoazy: Alluminum karazana basy: toerana misy ny herinaratra: Zhejiang, Sina anarana marika: K2 laharana modely: MDJ-166 Anaran'ny vokatra: K2 Revolution Interface Machine Cartridge: RCA Motor: Alemana Coreless Motor 25x22mm Hafainganana: 12V 11000rpm Halava fanjaitra azo ovaina: 0.1-4mm fonosana: 1pc / boaty lanja: 0.6kg Loko: Pink, Black, Gold Advantage: Stable Ampiasaina amin'ny: Tattoo Ahoana no fomba hanafarako santionany ...
Machine KingKong 3 Tattoo Cartridge
Motera alemanina tsy misy kodiarana Haingam-pandeha: 12V 11000rpm 480 torela lehibe AIR FREIGHT: Ny fomba tsara indrindra handefasana fandefasana entana antonony (mihoatra ny 100kg) na rehefa tsy afaka miandry ny fivezivezena an-dranomasina ny fizotranao. Miorina amin'ny lanjany sy ny habetsany ny tahan'ny entana entina amin'ny rivotra. Ny entana sasany toy ny foam dia maka habaka betsaka nefa maivana ary ny entana sasany toy ny vy dia mavesatra be nefa kely ny toerana. Ny vidin'ny fandefasana entana marina dia mitaky lanjany sy ny habetsany ary ho dinihina. Amin'ny ankapobeny, ny fotoana fitaterana dia tsy mihoatra ny 10 miasa d ...
Masinina Cartridge Tattoo IPHISE
Coreless Motor Rotational Speed: 9000rpm Adjustable Needle Lava: 0 - 3.5mm 1. Coreless motera, ny hafainganam-pandehan'ny 12/9000 dia manome antoka ara-pahombiazana ny fahamarinan-toerana ny milina, ny hery dia matanjaka: 2. Low hoditra simba, ambany tabataba, haingana fandokoana, tsy misy asa mafana eo anelanelany! Ny vatana dia vita amin'ny aliminiam-piaramanidina; izy io dia nohamarinin'ny fitaovana milina CNC axis dimy mba hahazoana antoka ny fahalavorarian'ny vatana sy ny halehiben'ny habeny! 3. Ny ambonin'ilay fiaramanidina dia nohosorana fitaratra ary namboarina ...
Masinina Rotary Tattoo Rotary (Coreless Motor)
Lanja milanja: milina tokana: 85g lanja lehibe: 170g habe: milina tokana: 50x52x33mm (anisany ny halavan'ny tsorakazo 91mm) kapoka: fivoahana fanjaitra faran'izay 4mm fonosana: boaty ambony sy ambany fonony Loko: loko 7 mena-manga-volamena-volafotsy-mavokely- volomparasy-maitso Lisitra fanamafisam-peo: milina * tehina 1 thimble * fonosana fidirana kely 2 * 1 Safidy: fehin-tànana sy tariby Parameter: 1. Interface: RCA interface 2. Fitaovana: firaka aliminioma 3. Fomba: sary sokitra miorina mifangaro ao amin'ny CNC 4. Motor: Coreless motera 5. Volana fanombohana: 4-5v ...
Masinina cartridge tattoo alien (Coreless Motor)
Milanja milanja: milina tokana: 74g miampy tantana: 170g Lanja mavesatra: milina tokana: 170g miampy fametahana: 280g habe: Masinina tokana: 35 * 63 * 110 (halavan'ny tsato-kazo) mm miampy tahony: 133 * 35mm Haben'ny tanany: 83.8 * 30.5mm Fonosana: boaty ambony sy ambany sarony Loko: 6 loko mainty-mena-volomparasy-volomparasy-champagne Lisitra fanamafisam-peo: milina * tehina famindrana 1 * 3 fonosana fidirana kely * 1 tantana (tsy voatery) Parameter: Interface: RCA interface 2. Fitaovana: firaka aliminioma 3. Craft: sokitra miorina tsara amin'ny CNC 4 ...
Machine KingKong 2 Tattoo Cartridge
Môtô: USA Coreless Speed ​​Rotational Speed: 12000rpm Fanjaitra azo ovaina Halavany: 0.1 - 4mm DC mpampitohy, fitondra-tena lehibe. Hafainganana sy hery matanjaka, mahomby. Herin'aratra, tsy hafanana aorian'ny niasa adiny 8. Tabataba ambany, manome tontolo mangina ho an'ireo mpanakanto tatoazy sy mpanjifa. Ahoana ny fiasan'ny vidiny? Arakaraky ny andoavanao ny vidiny ambany no ho azonao. Tena marina izany ho an'ny vokatra OEM / ODM satria natao ho anao IHANY. Ny fampandrosoana rehetra, mamolavola ...
Masinina Rotary Tattoo Shell
Masinina lehibe 9V 12000rpm Tattoo Machine DC Interface Alemanya Faulhaber Motor Shell Tattoo Rotary Machine Famaritana: Ny milina dia manana banga vita amin'ny firaka alimina vita amin'ny alim-baravarankely miaraka amina loharano maivana LED rehefa ampandehanana sy fonosana azo esorina sy azo ovaina ary sarona cam. Ity milina ity koa dia mampiasa fitaovana fanaraha-maso torsion vaovao misy pataloha miisa telo - malefaka, salantsalany ary mafy. Ny fiasa fanampiny dia misy ny fahatsapana tsy misy polarity ary tsy misy fanemorana fanombohana. Ny milina dia manana bileta al ...